Ogaden News Agency (ONA) – Xukuumadda Itobiya oo doonaysa dacaayad beenaad inay ku sharciyayso Dastuurkeeda
Xukuumadda Itobiya oo doonaysa dacaayad beenaad inay ku sharciyayso Dastuurkeeda
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa bayaan ay saxaafadda u qaybisay ku sheegtay in xukuumadda Itobiya maalmihii la soo dhaafay ka waday Ogadenya waxay ugu yeedheen “Kulan wada-tashi” ka dhexeeya maamulka fadhiya Jigjiga iyo dadweynaha. Bayaanka waxay ku xustay JWXO inay xukuumadda Itobiya ku andacootay inay ka koobanaayeen dadka meesha isugu yimid qaybaha bulshada Ogadenya sida odayaasha, culamada diinta, ururada bulshada, indgeergaradka iyo waliba qaar ka socda Qurbajoogta. Hasa ahaatee, xaqiiqada la ogsoonaa waxay ahayd inay Itobiya iyadoo adeegsanaysa maamulka daba-dhilfka ah ee ka jira Ogadenya, la amray maamulada degmooyinka inay si qasab ah ku soo kaxeeyaan oy keenaan shirka odayaasha iyo culamada la yaqaano. Sidoo kale qaar ka tagay Khaliijka oo ahaa xawaaladihii hadda ka horba looga qaatay lacagaha faraha badan mashruucii Biya-xidheenka ayaa joogay, kuwaasoo tijaaradooda ay ku xidhan tahay Ogadenya.
Waxaa intaa dheeraa oo goobta shirka la soo joojiyay maxaabiis laga soo keenay Jeel Ogaden oo lagu qasbay inay is sharaf dilaan oy qirtaan inay ku kaceen dambiyo dhaqanka Somalida iyo diinta islaamka midna aan u suubaneyn, iyagoo waliba hortaagan reerahoodii, taasoy ugu talagaleen (cabdi iley iyo kooxdiisa) inay ku noqoto ceeb aan waligood ka hadhin maxaabiistan la soo qasbay iyo reeraha ay ka dhasheenba. Falkan ayaa ka cadhaysiiyay Odayaasha oo si cad uga horyimid, taasoo dhalisay in mid ka mid ah odayaashii u dhinto jidh-dil loo gaystay.
Waxaa intaa dheereyd iyadoo dadkii fadhiyay shirka la faray inay yidhaahdaan waxaan ogolaanay dastuurka Itobiya iyo ONLF wakiil nagama aha anaga. Waxaa kaloo lagu qasbay inay yidhaahdaan nabad iyo horumar ayaa ka jirta “Gobolka Somalida” waxayna ka soo hor-jeedaan nabad-diidka, iyo inay ballan ku qaadayaan inay difaacaan –sida nidaamka ka jira Waqooyiga Kooriya – Xasuusta Aabahii Qaranka oon jecelnahay- iyo waxaan ilaalinayaa “Kacaankii EPRDF”.
Arimahaa waxay daliil cad u yihiin diidmadii ONLF ay diiday inay aqoonsato sharcinimada dastuurka Itobiya iyadoo shacabka Ogadenya aanay ogolaanin inay ku baraarugtay xukuumadda Itobiya oy hadda raadinayso inay u abuurto taageero beenaad xukunkeeda iyo dastuurkeeda.
Sikastoy isugu daydo xukuumadda Itobiya inay ku qasabto dadka shacabka ah ee Ogadenya inay isku sharaf dilaan Kaamiradaha hortooda, siday horeyba ugu qasabtay saxafiyiintii Sweden, caalamka wuu ogsoonyahay waxay tahay xukuumadda Itobiya mana ku khaldi karto filimadaa beenta ah.
Ugu dambayn, ilaa inta dadweynaha Ogadenya looga ogolaanayo inay helaan xaqooda aan la duudsi karin ee aaya-ka-tashi, wax iska hortaagi kara halgankooda ma jiro, ha ahaato cadaadis, cuna-qabatayn, xasuuq iyo dil, ama shirar beenaad lagu taageero dastuur aan sharci ahayn.